'दसैंमा बुढापाकासँग टीका लगाएर आर्शिवाद नलिनू' : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
211 पटक पढिएको
काठमाण्डौ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिने डर भएकाले यस वर्षको दसैंमा बुढापाकासँग गएर टीका नलगाउन आग्रह गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दसैंमा बुढापाकासँग गएर टीका लगाएर आर्शिवाद नलिन आग्रह गरेका हुन्।
'धेरै बुढापाकासँग गएर यस पटक टीका नलगाउँ' प्रवक्ता गौतमले भने 'बरु अनलाइन वा फोनबाट आर्शिवाद लिउँ। ' त्यस्तै प्रवक्ता गौतमले धेरै भीडभाडमा गएर टीका लगाउने र खाने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्।
'तपाइँ हामीले आफ्नो पाका सदस्यहरुसँग आर्शिवाद लिने क्रममा संक्रमण सारेर के दुर्घटना त निम्त्याउने योजनामा छैनौं ?' प्रवक्ता गौतमले भने 'त्यसो नगरौं, समयमै सचेत बनौं ।'
त्यस्तै उनले दसैंमा भीडभाडमा गएर किनमेल नगर्न भनेका छन्। 'दसैंमा भीडभाडमा गएर सपिङ नगरी भएकै लुगा कपडा र सरसमानको उपयोग गरी पुरानै लुगा लगाउँ' उनले भने 'घरमै बनाएको खाने कुरा घरकै सदस्य मिलेर मात्रै खाउँ।'
नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या एक लाख नाघेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २ हजार ५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख ६ सय ७६ पुगेको छ।
नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६ सय ८४ पुगेको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा ११ हजार १ सय ७६ जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा १५ हजार ८ सय ७७ जना छन्।
गौतमका अनुसार २४ घण्टामा १० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय पुगेको छ।